Ihe nkesa 7 kacha mma GNU / Linux | Site na Linux
Ihe nkesa 7 kacha mma GNU / Linux
Na Linux.com, ọnụ ụzọ ahụ raara nye ụwa nke penguuin anyị hụrụ n'anya, ha edepụtala nkesa Linux kacha mma 7 dịka niche dị iche iche.
Linux kacha mma
Mma Nkesa Linux: Ubuntu
Kachasị nkesa Linux maka laptọọpụ: openSUSE
Kasị mma nkesa maka ụlọ ọrụ: Novell SLED
Nkesa nkesa kacha mma: RHEL Server
Kachasị mma Live Live: AKWPKWỌ
Kasị mma nkesa na nche: BackTrack
Kasị mma multimedia Linux nkesa: Ubuntu Studio
O doro anya na ụdị ndepụta a na-echekarị oge ụfọdụ na echiche nke ndị ọrụ (nkesa iji nụrụ ụtọ, ọ bụ ya mere e ji nwee ọtụtụ). Mana ọ naghị afụ ụfụ ile ya anya, maka ndị ọrụ na-ejitụbeghị nkesa Linux, ọ nwere ike inye aka na nhọrọ ha. M na-agba gị ka ị gụọ na Linux.com isiokwu nke ha na-akọwa ihe kpatara nhọrọ ha.
Hụrụ na | TuZonaWinLinux
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe nkesa 7 kacha mma GNU / Linux
na nnyocha dabeere na onye masịrị ya
Nkesa kacha mma Linux: Ubuntu <--- Ka mma n’uzo ??? ọ bụla ama na-ewu ewu
Kachasị nkesa Linux maka laptọọpụ: openSUSE <--- Ee, ọ bụ ezie na ọ na-enye nsogbu na acer otu
Nkesa kacha mma maka ụlọ ọrụ: Novell SLED <--- gịnị kpatara eji akwado naanị ya?
Kasị nkesa ihe nkesa kacha mma: RHEL Server <--- ???
Kasị mma Linux LiveCD: KNOPPIX <--- kedu ihe nke a dabere? nke mbụ ee
Nchekwa nkesa kacha mma: BackTrack <--- mmmm
Kasị mma mgbasa mgbasa ozi Linux: Ubuntu Studio <--- Anaghị m anwale ya
Javier E. Sola dijo
NOvell SLED, na mgbakwunye na nkwado, nwekwara nchịkọta mmemme emere maka ụlọ ọrụ (nkwukọrịta dị n'ime, otu, ndị ahịa citrix, na ahịhịa ndị ọzọ); Na mgbakwunye, ihe niile adịworị njikere ịbanye na ndekọ ndekọ Ọrụ ma ọ bụ LDAP site na igbe dị ukwuu. Nkọwa ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma iji mejuputa ụlọ ọrụ.
N'ezie, nke distros m gbalịrị, maka ebe m na-arụ ọrụ, ọ kachasị mma (nke a bụ echiche onwe onye).
Zaghachi Javier E. Sola
Linugux efu dijo
n'ihi na gi na nke
Zaghachi Linugux Zero
Maka m ... Linux Mint, Arch, Debian, CrunchBang, ArchBang, Trisquel na Fedora.
Onwe ya distro kachasị mma maka nchekwa bụ Bugtraq. Ọbụghị naanị n'ihi na ọ bụ nke zuru oke, ọ na-akwụsi ike, na-akpaghị aka, yana ule nnabata na-aga n'ihu. Bịanụ, ọ bụ ihe kachasị nke kachasị.
"Na Bugtraq anyị tụkwasịrị obi". Ah, echefuru m, ụmụ okorobịa 2 si Madrid emeela ya, ma ugbu a ọ dị na asụsụ 11, na-enwe ike ịhọrọ n'etiti dabere na Debian, Ubunto, na imeghe SUSE.
Bugtraq 2 bụ nwa nwanyị di ya nwụrụ nke distros !!!!!!!!!!
Arturo Santos dijo
Enwere m obi uto ubuntu ma ugbua agbaliri m fedora ma enwere m afọ ojuju.
Zaghachi Arturo Santos
Na uto na agba ndị edere edeghị ya, echeghị m na ha dere banyere nke bụ ndepụta ndị dị elu na gnu / línux distros.
Enweela ọtụtụ esemokwu, maka ịnwale posts ndị edere n'elu, maka m ọ dị mfe ịhọrọ distro kachasị mma na ọkwa onye ọrụ:
1 ° Họrọ ụdị ma wụnye ya na desktọọpụ gị ma ọ bụ laptọọpụ gị.
2 ° Họrọ tebụl (nke) ahụ masịrị gị ma ọ bụ site na nkwanye ma ọ bụ ozi na ịntanetị.
3 ° Were ule nke ị chere na ọ dị mkpa na nke kwekọrọ na mkpa gị.
4 Celsius Ozugbo ị rụnyere, reinstalled na screwed ụfọdụ ike draịva ị ga-enwe ike ikpebi nke bụ ihe kasị mma distro gị, na ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ adaba ka nwere ike ikwu na ya ndị ọzọ.
5 ° Obi dị gị ụtọ !! (:
5 ọkwa nke Linux ọrụ
Ailurus 10.2 dị